नागरिक पलायनको दीर्घकालीन असर | चितवन पोष्ट दैनिक
नागरिक पलायनको दीर्घकालीन असर
२०७० फाल्गुन १, बिहीबार ०१:४३ गते
दुनियाँमा कहीँ, कतै नभएको अचम्मको घटना नेपालमै हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपाल प्रहरी संगठनमा हालैमात्र एउटा अपत्यारिलो घटना पत्याउनै पर्ने बाध्यताका बीच सार्वजनिक भयो । विकास अधिकारी नाम गरेका प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई प्रहरी संगठनले कमान्डो तालिमका लागि विदेश पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यस प्रकारको तालिममा जान पाउने व्यक्तिलाई इज्जत प्राप्तिका हिसाबले निकै भाग्यमानी ठानिन्छ, तर अचम्मै भयो । ती प्रहरी सहायक निरीक्षक अधिकारीले तालिममा नजाने बताएर सबैलाई अक्क न बक्क पारिदिए । भएको के रहेछ भने ती असईले अमेरिकी भिसा पाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका रहेछन् र अन्तिम पटकको मौखिक परीक्षाका लागि उनी आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेछ । उनले जागिरै माया मारेर त्यो मौखिक परीक्षामा सामेल हुन चाहे । प्रहरी संगठनले दिएको जिम्मेवारी र आदेश पालना नगर्दा जागिरै जान सक्छ भन्ने कुरा उनले नबुझेका पनि होइनन् । यति थाहा पाउँदापाउँदै पनि उनले तालिममा जान अस्वीकार गरे । प्रहरीको जागिरमा इज्जत छ, दुई–चार रूपैयाँ भने पनि तलब–भत्तास्वरुप पाइन्छ । अरुलाई सुरक्षा दिन खटिने व्यक्ति आफैँ सामान्यतः अरु नागरिकभन्दा सुरक्षित पनि रहन्छ । बर्दीमा एकतारा टाँसेर जनताको माझमा जाँदा फूर्तिफार्ती पनि बेग्लै हुन्छ । अहिले पनि अरु पेसा र जागिरभन्दा नेपाल प्रहरी संगठनमा प्रवेशका लागि मान्छेहरु मरिहत्ते गर्छन् । सत्य÷असत्य के हो, निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
भन्नलाई भनिन्छ कि प्रहरी संगठनमा सिपाही पदमा पुग्न झन्डै एक लाख रूपैयाँ खुसुक्क कतै बुझाउनुपर्छ । असईका लागि पाँच लाख र इन्स्पेक्टरका लागि दस लाखसम्म टेबुलमुनिबाट लिनेदिने गरिन्छ र शक्तिशाली मान्छेकहाँ त्यो रकम पु¥याइन्छ, बाँडचुँड गरेर त्यो दाम हाम गरिन्छ । यस्तो महँगो र इज्जतदार जागिरको माया नगर्नुलाई चानचुने बलिदान भन्न पनि सकिन्न । यति भइकन ती असईले आफ्नो जागिर धरापमै पारेर पनि अमेरिकी भिसाका लागि जाँच दिन जाने तर तालिममा नजाने कुरा गरे । प्रहरीको बर्दीमा रहेको एक नेपाली नागरिकलाई असक्षम नागरिक भन्न कुनै कोणबाट पनि मिल्दैन । यी नागरिकलाई सक्षम नागरिकका रुपमा लिनैपर्छ । हिजोआज मात्रै नेपाल प्रहरी संगठनका उपल्ला तहका अफिसरहरु पनि विदेश पलायन भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । कुनै नेपालमा छँदा डिभी चिट्ठा भरेर विदेश पलायन भएका छन् त कुनै अफिसर शान्ति मिसनमा जाने र उतैबाट अर्को देश हाम फाल्ने र पलायन हुने गरिरहेका छन् । लटरपटर दर्जाको पनि होइन, डिआईजी शारदा पराजुलीलगायत एसएसपी र एसपी अनि डिएसपी र इन्स्पेक्टरसम्मका थुप्रै प्रहरी कर्मचारीहरु पलायन भएका रहेछन् । यस्ता योग्य नागरिकहरु जो नेपाली जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने जिम्मेवारी लिएर बसेका थिए, तिनै पलायन भए । यो घटना सामान्य घटना होइन । यसले निरन्तरता पायो भने एकातर्फ शान्ति सुरक्षाको स्थिति डरलाग्दो हुन्छ भने अर्कोतर्फ बिस्तारै–बिस्तारै जन्मभूमिलाई भन्दा विदेशलाई माया गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र कालान्तरमा मुलुकमा केही समय वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै बाँकी रहन्छन् । अनि, त्यसको केही समयपछि मुलुकै बेवारिसे अवस्थामा पुग्छ र टुंगिन्छ पनि ।
यहाँ पलायनबारे चर्चा प्रहरीको मात्रै गरियो । कुमार लामा नाम गरेका एक नेपाल आर्मीका उपल्ला कर्मचारी बेलायतमा पक्राउ पर्दा उनले पनि ग्रीनकार्ड पहिल्यै लिइसकेको बुझियो । मुलुक रक्षाको जिम्मेवारी लिएका नेपाल आर्मीका ती जिम्मेवार कर्मचारीले विदेश बस्ने अनुमतिपत्र पहिल्यै ठीकठाक पार्नुजत्तिको लाजमर्दो स्थिति अरु के हुन सक्ला ? तिनले मात्रै त्यो काम गरेका हुन् कि अरुले पनि त्यही तरिकाले विदेश बस्ने मेसो मिलाएका छन् ? आजसम्म कसैले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सुनिन्छ, नेपाली निजामती कर्मचारीका पनि उपल्ला तहका कर्मचारीहरु बहाल रहँदैमा विदेश घुम्न जान्छन् र विकसित मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न मेसो मिलाउँछन् । यस्ता केही उदाहरणहरु विगतमा फेला परिसकेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फका जनशक्तिहरु समेत धमाधम पलायन भएको खबर प्राप्त भएका छन् । नेपाली डाक्टर शंका गरिएजत्तिको पलायन नभए पनि नर्सको भने ठूलो संख्या बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा सदाका लागि भासिएको खबर प्राप्त भएको छ । पढ्ने बहानामा नेपाली विद्यार्थीहरु अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र जापान गएका छन् । हजारौँहजारको संख्यामा गएका विद्यार्थीहरुमध्ये दुई प्रतिशत पनि फर्केर आएका छैनन् । चौहत्तर जिल्लाका मान्छेले काठमाडौँको एयरपोर्टतिर फर्केर हेर्दा देख्नेछन्, दैनिक सयौँको संख्यामा हवाईजहाज चढ्दै गरेका नेपाली युवायुवतीहरु । तिनले नेपालमा काम पाएनन् । काम गर्न चाहनेलाई काम उपलब्ध गरिएन । काम गर्न नचाहनेको अर्थै रहेन । नेपालमै काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सरकारले सकेन । भएका उद्योगधन्दा प्रायः सबै बन्द गरिए । किन बन्द गरिए र कसले बन्द ग¥यो, कसैलाई ठीक तरिकाले थाहा छैन । देशै रित्तो पार्ने तरिकाले काठमाडौँ एयरपोर्टबाट दैनिक सरदर १२०० जना युवायुवतीहरु विदेश गइरहेका छन् । गाउँमा अब त बूढाबूढी र बालबालिका मात्रै देखिन थालेका छन् । कोही बिरामी भयो, अस्पताल लगिदिने मान्छे छैन । कोही म¥यो, सद्गत् गर्न मलामी छैन । बूढाबूढीले लास बोक्न सक्ने कुरा भएन, बच्चाले बोक्न सक्ने कुरै आएन ।
काठमाडौँ एयरपोर्टबाट लस्कर लागेर विदेश जानेहरुको कुरा बेग्लै भयो, खुला सिमानाबाट छिमेकी मुलुक भारततिर लागेको मान्छेको लर्को देख्दा रूनै मन लाग्छ । कहाँ जाँदैछन् हाम्रा युवायुवती ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हुन्छ– विदेशीहरुका लागि काम गरिदिन । दुई–चार हजार होइन, लाखौँलाख नेपालीहरु भारतमा भाँडा माझेर बसेका छन् । चौकीदारी गरेर नुन–भुटुन कमाइरहेका छन् । त्यसरी विदेशीको सेवा गर्न बाध्य भएका नेपालीहरु कति मारिन्छन्, कति सिमानामा लुटिन्छन्, कति पिटिन्छन्; त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन, गन्ती यकिन छैन । भन्नेहरुले भन्दैछन्, छिमेकी मुलक भारतमा मात्रै स्थायी र अस्थायी रुपमा काम गर्दै र बस्दै आएका नेपालीको संख्या ७५ लाख छ । भारतलाई छाडेर अन्य देशमा गएका नेपालीको संख्या ३६ लाख छ । एक करोडभन्दा बढी नेपाली नेपालबाहिर छन्, त्यो पनि मेहनत मजदुरी गरेर खानका लागि । योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अर्को के हुन सक्छ ?
संसारका अरु देशमा नियम छ, कानुन छ । तिनका नागरिक अर्को देशमा गए भने सम्बन्धित देशको सरकारलाई पूरै जानकारी हुन्छ । मेरो देशको फलानो नागरिक फलानो देशमा गएको छ भन्ने जानकारी तिनलाई हुन्छ । बिनापासपोर्ट तिनका नागरिक कतै जाँदैनन् । अन्य देशमा घुम्न वा कुनै कामविशेषले गएका आफ्ना नागरिकलाई केही अप्ठ्यारो प¥यो भने सम्बन्धित देशको सरकार वा राजदूतले तुरून्तै चासो र चिन्ता लिन्छन् । आफ्ना नागरिकलाई उनीहरु अमूल्य सम्पत्ति ठान्छन् । एउटा अमेरिकी नागरिक नेपाल घुम्न आउँदा तल–माथि भयो भने अमेरिकी राजदूतावास सक्रिय भइहाल्छ । आफ्नो नागरिकको खोजी आफैँ गर्छ र हाम्रो देशको सरकारलाई पनि आफ्नो नागरिक खोजिदिन र आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने खालको आदेश दिन्छ । तर, विडम्बना ! आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा भाडामा लगाएर दाम कमाउने सोचाइ राख्ने नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकहरु कहाँ–कहाँ छन्, केही जानकारी राख्दैन । बम्बैका वेश्यालयमा कति नेपाली चेली नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसको हिसाब नेपाल सरकारसँग छैन । माइती नेपाल वा त्यस्तै नामको कुनै सामाजिक संस्थाले भनिदियो भने बेग्लै कुरा, होइन भने नेपाल सरकार जानकारशून्य छ । साउदी अरेबियाका अस्पताल हातामा जोडिएका मुर्दाघरहरुमा सयौँको संख्यामा नेपाली युवाका लासहरु बाकसमा कुहिएर थन्किएका छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । तिनले जिउँदो छँदा नेपाल पठाएको रकमले मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्नेहरुको मन कस्तो होला, जुन मनले ती नेपाली लासहरुलाई नेपाल ल्याएर जलाउने, गाड्नेसमेत गर्दैन !
मर्न त सबै मान्छे पालैपालो मर्छन् नै । देखियो, पेटभरि अन्न खान नपाउने शक्तिखोरका चेपाङ मरेको देखियो । सबै शानसौकतवाला राजा वीरेन्द्र मरेको पनि देखियो । देशलाई माया गर्ने पृथ्वीनारायण, जंगबहादुरहरु पनि मरे । मौका मिले देश बेच्नेहरु पनि मर्नेछन््, तर सवाल कहाँ मर्ने र कसरी मर्ने भन्नेचाहिँ मह¤वपूर्ण हुन्छ । फरक पनि त्यहीँनेर छ । आज बिस्तारै–बिस्तारै विभिन्न पेसाका जिम्मेवार भनिएका नेपाली नागरिकहरु विदेश पलायन भएर मुलुकलाई जिउँदै मारेर आफू विदेशी भूमिमा मर्न गएका छन् । उनीहरु त्यहाँ मर्नेछन्, बाँकी यहाँ पालैपालो मर्नेछन् । नेपाली नागरिकहरु विदेश पलायन भइरहेको यो अवस्थाको अन्त्य गर्नेे हो भने नेपाल नेपालकै रुपमा अनन्त कालसम्म रहिरहने छ । यदि यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने यसको परिणाम दर्दनाक हुनेछ । दर्दनाक अवस्था स्वदेशमा वा विदेशमा बसेर हेर्न, सुन्न पर्नेहरुलाई भने पश्चात्ताप मात्रै हुनेछ ।
अब भन्न यतिमात्रै सकिन्छ– नेपाल सरकार, नागरिक पलायन रोक । मिले रोक, नमिले कानुन बनाएर पनि रोक र जसरी पनि रोक । चाहे रोजगारी दिएर रोक, दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिएर भए पनि रोक । कम्तीमा अस्पताल पु¥याउने र घाटसम्म लास पु¥याउने मान्छे बाँकी राखिदेऊ । सरकार, सरकारैजस्तो बनेर प्रस्तुत भइदेऊ ।